OROMIA: SEENAA JIREENYA SABBOONAA QEERROO OROMIYAA, SANYII IDDOOSAA | OromianEconomist
OROMIA: SEENAA JIREENYA SABBOONAA QEERROO OROMIYAA, SANYII IDDOOSAA	September 6, 2015
Tags: Oromo, Oromummaa, SANYII IDDOOSAA, SEENAA JIREENYA SABBOONA QEERROO OROMIYAA
Shambal IDDOOSAA bara 1979 A.L.H. abbaa isaa obbo IDDOOSAA TURAA fi harmee isaa addee HUNDIYYEE LABATAA irraa godina shawaa lixaa aanaa abunaa gindabarat ganda qotee bulaa SOMBOO WALISOOTTI dhalate.Shambal ykn SANYII IDDOOSAA obboleewwaan dhiiraa 3fi durbaa 4 walin dhalate yoo tahu, maatii isaatif ilma 2ffaadha.Shambal mucaa safuu fi duudhaa hawaasa isaa kabajuufi guddisuuf tattaafatuudha.SANYII ykn Shambal guddatee ganna 8booda gara aanaa Ada’aa bargaa fira bira dhufudhan barnoota isaa jalqabe. SANYII IDDOOSAA nama waan ofiitif dhahamu, nama eenyuummaa isaa kabachiiauuf halkanii guyyaa dadhabu, nama lammii isaatif duursa jaalala qabu, qeerroo waan saba isaatif hin jilbiffanne, goota oromiyaadhaf of wareegu, qeerransoo maccaafi tuulamaa kan alagaaf gad hin jenne, dhiira madaan wayyaanee qaama isaa guute, qeerroo manni hidhaa wayyaanee mana jireenya isaa taate, kan ofduuba hin deebine… .madaayee jedhee kan hin nuffinee……kan yoom bilisummaa Oromo first fi oromiyaa arguufi argamsiisuuf Yeroo lakkaayaa jiru ture.
Shambal bara 2014 tti maqaa isaa gara SANYII tti jijjiire. SANYIn nama hiyyuummaa qabsoo qabu, nama haqa malee goonkuma soba hin beekne, nama ofiif otuu hin taane namaaf qofa jiraate, Oromoo hunda amantaa, umurii, kutaan, sadarkaa baruumsan, soorummaafi hiyyuummaan……osoo adda hin baafne oromummaa isaanii fi oromiyaa isaanii sabni isaa akka beekuufi beeksisu nama hirriiba dhabee carraaqaa tureedha. SANYIIn maqaan inni uummata isaa biratti ittin beekkamuufi waammamu “mucaa uummataa” jedhamu dha.sababa diinaatif amantaan isaa kan madda waalabu irraa jalqabde Yeroo dheeraaf dhokatuus aarsaafi wareegama cimaa kanfaluun hordoftoota amantaa WAAQEEFFANNAA walin bara 2014 tti magaalaa muger muka Odaatti HORA MALKAA BIRRAATTEE tti nama dhagaa bu’uuraa kaayedha ykn ummataaf ifatti baaseedha. Kana malees SANYIIn Yeroo baratuu kaasee Hanga ammaatti nama GDASAO dhaabeefi gara ammayyaatti as ceesiseedha. SANYIIn duudhaa, aadaa, amantaa, safuu, seera, sirna gadaa fi ittin buulmaata ummata oromoo kush kan iyyaafachaafi qorachaa tureefi itti jiruudha. Nama Oromoon akka wal baruufi wal jaalatu, nama nama lammiin Oromo kamiyyuu akka waliifi biyya isaa oromiyaadhaf dhabbatu sodaa diinaa tokko malee dalagaa tureedha.
SANYIIn gama ogummaa jireenya isaatinis konkolaachisaa doozeriiti. SANYIIn fuulbaana 4/2015 sa’aatii 8 tti osoo maashinichan hojjechaa jiru sababa sigigaachuu lafaatin dhabbaata warshaa simintoo Dangotee jedhamu keessa tti lubbuun isaa dabarte…….uuuuuuuuuufffffffff SANYIIkoo Yeroo mana hidhaa keessa walin turre wal gargaaraa turre. Hardha eenyuutu sigargaara?????? Osoo naaf dandayamee sin gargaara ture…..rabbi himachuu hin dandayaani maal siif godhu??????? ofbiraa sidhabuu kiyya tti gaddi natti bubbiseeraa…..SANYII koo kaayoofi waadaa saba keenyaa walin seenne hiriyoota kee walin itti fufnee galmaan geenya. yoomiyyuu bara baraan ummata kee biraatti bakka guddaa qabda. biyyoon sitti yaa Salphattu, boolla kee daadhiin yaa guutu………..
Hiriyaa Saanyii irra,
Ijoollee Dirree Tuulamaa
1.	OromianEconomist - September 9, 2015